साउन १४ गतेबाट खुल्दै अर्को आइपिओ, हेरौं कस्तो छ कम्पनी? कति कित्ता भर्दा ठिक? – Eps Sathi
July 21, 2021 615
मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीले साउन १४ गतेदेखि कुल ७ लाख २६ हजार २८६ कित्ता आइपीओ नि’ष्का’सन गर्ने भएको छ । कम्पनीले यसमध्ये २% अर्थात १४ हजार ७२६ कित्ता सेयर कर्मचारी र ५% ले हुने ३६ हजार ८१४ कित्ता सेयर म्युचुअल फन्डलाई छु’ट्याएको छ । बाँकी ६ लाख ८४ हजार ७४६ कित्ता सेयरमा सर्वसाधारणले आवे दन दिन सक्नेछन् ।
यसमा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा आवे दन दिन सकिनेछ । यो आइपीओमा साउन १८ गतेसम्म आवे दन दिन सकिनेछ । उक्त समयमा सबै आइपीओ बिक्री नभएमा भने साउन २८ गतेसम्म खुला रहनेछ । यो आइपीओमा बिक्री प्रबन्धकको काम सिद्धार्थ क्यापिटलले गर्नेछ । लगानीकर्ताले आश्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मरोसेयरमार्फत अ’नलाइनबाट आ’वेदन दिन सक्नेछन् ।
यता, कम्पनीले यसअघिनै आयोजना प्र’वाभित स्थानीयका लागि ३ लाख ६८ हजार १४४ कित्ता (१०%) आइपीओ बि’क्री गरिसकेको छ । मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको जारी पुँजी ३६ करोड ८१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ छ । यो जलविद्युत आयोजना रसुवा जिल्लामा अवस्थित छ । (नेपालीपैसाबाट)
Prevकामदार लैजान कोरिया सकारात्मक, मन्त्रालयको निर्णय कुर्दै विभाग
Nextकोरियाको एनआरएनएमा विवाद, सदस्यता लिएकालाई उम्मेद्वार हुन बञ्चित